bhuwan.np – मझेरी डट कम
संसार विजय गरेँ भनेरअन्तरिक्ष कब्जा गर्ने होडमा थियौ क्यारे ।आज अदृश्य शुत्रसँग पराजित भएरआफू मात्र… Read More »अदृश्य शत्रु
प्रतिक्रिया सुरु भयो
सुन्दै छु ,
भन्दै छन् ,
धुवाँ भरिएका काला बेलुनहरू
अनवरत बगिरहने तरल नदीहरू
हामीलाई सिकाइएको छ
निरन्तर बग्नुपर्छ समुद्रतर्फ
रोकिनु हुन्न श्वमशान बगरहरूमा
हामीलाई थाहा छैन
के हुन्छ समुद्रमा पसेपछि
के हुन्छ नदी समुद्रमा समाधिस्त भएपछि
त्रिलोचन सापकोटा 'आशिष'
करोना कहर (१)
आधा लाखको हाराहारी मान्छे मारिसक्यो ।
कोरोनाले विश्वभरि सङ्कट पारिसक्यो ।।
नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका हैनन् ।
अझै पनि मानिसहरू ढुक्क भने छैनन् ।।
लकडाउन छ थुप्रै देशमा बढिरह्यो त्रास ।
गरिब दु: खी मानिसले कसको गर्नू आश ?
थुप्रै देशलाई ऋणको भारी बोकाएको किन ?
हजारौं जन खाइसक्दा नि भोकाएको किन ??
भ्याक्सिन बनाई यसलाई तह लगाउन पाए ।
रमाउथ्यो मन छिट्टै यसलाई भगाउन पाए ।।
कोरोनाको कहरबाट मुक्ति देऊ प्रभू ।
त्यसलाई नष्ट गर्न सही जुक्ति देऊ प्रभू ।।
बघिनीको सिकारमा रमाउने हुइयाँहरू
रगत चुसेर बाँच्ने जुकाहरू
जो गर्दैनन् आफै शिकार
र बुझ्दैनन् श्रमको मूल्य
संवेदनामा विवेक गुमाउनेहरू
हुँदैनन् कहिल्यै मानवताका पुजारी
तिमी जतिसुकै उदार या एकलव्य बन
February 15, 2020 May 15, 2021
तिमी र म फरक फरक सहरमा
एकैसाथ हरायौँ ।
फरक फरक वस्तीमा
फरक फरक बाटो बनाएर हरायौँ ।
खोज्नेले एउटै आरोप लगाइ
एउटै सहरमा खोजे ।
जीवनको दार्शनिकता खौज्दै गर्दा
सुदूर क्षितिजको लालित्यमा
पुराना स्मृतिका गुञ्जन सल्वलाउँछन् ।
ऐँसेलुको झ्याङमा अल्झिएको
तिम्रो कुसुमे रुमालसँग
माया साट्दै गर्दा
अझैँ याद आउँछ होला है !
May 11, 2019 May 15, 2021
जिन्दगी यात्रा हो,
कहिले रहरमा हिँडिन्छ
कहिले कहरमा दौडिन्छ
सबैसबैलाई अरुको यात्रा
रोमाञ्चक लागिदिन्छ ।
यात्रा गर्नेलाई रोमाञ्चक
नलाग्न पनि सक्छ ।
साल-नालदेखि यात्रा सुरु भयो
ब्रह्मनालसम्म कसले साथ दिन्छ र !!
काठमाडौंको बसाइँ भनेपछि सधैंसधैंको हतार त हुने नै भयो । काठमाडौं खाल्डामा पढ्न होइन पढाउन कलेज धाउन थालेको पनि केही वर्ष भएको थियो । कोठाबाट कार्यक्षेत्रमा निस्कने गल्लीको केही पर गणेश मन्दिर थियो । प्राय: जसो दिन एउटा मगन्ते मन्दिरको छेउमा थोत्रो कपडा फिजाएर माग्न बस्थ्यो। ऊ पागल हो कि सद्धे हो कहिल्यै बुझ्ने फुर्सद भएन ।
त्यस टोलमा म बस्न थालेको पनि चार वर्ष भइसकेको थियो । उसले पहिलो दिनदेखि नै प्रत्येक दिन स्वागत र बिदाइ गरेकै थियो । भौतिक रूपमा अपाङ्ग नभए पनि मानसिक रूपमा त अपाङ्ग हुनैपर्छ किनकि बृद्ध अवस्था नहुँदै काम नगरेर मन्दिरको सहारा लिएर मागेर जीवन चलाउँदै थियो ।
आउ साथी आउ…
आउ साथी आउ …
कामभन्दा भ्रष्टचार बढी गराऔँ ।
भ्रष्टचारको अखडा बनाऔँ ।
मन्त्रालय र पार्टी कार्यालयलाई
सबैभन्दा मालदार कम्पनी बनाऔँ।
तिम्रो र मेरो कस्तो सम्बन्ध ?
तिमीले कहिल्यै आफ्नो ठानेनौँ ।
मैले कहिल्यै पराइ ठानिनँ ।
तिमीले जित्यो कि मैले हारेँ
कहिल्यै सोच्ने प्रयास गरिनँ ।
तिमीसँग प्रश्न गर्ने
हो, म त्यही हुँ
युद्ध गर्ने मानस विम्ब,
नठाने हुन्छ महाशय !!
जनता लड्ने सडकमा देश बचाउने तडपमा
मन्त्री बस्ने सत्तामा, देश बिगार्ने नशामा
चिन्ता छैन मन्त्रीलाई देश बिग्रेर गएमा
चिन्ता छैन जनता भोका नाङ्गा भएका
मालिकलाई के थाहा त्यो एक नोकरको कथा
बिरामी नोकर सेवा गरिरहन्छ
स्वस्थ मालिक बिरामी भइरहन्छ
परिश्रम ऊ गरिरहन्छ फलको आश कहीँ कतै बाँकी छ
अचानोलाई दुखिरहन्छ खुकुरी आफ्नो कर्म गरिरहन्छ
लक्ष्य ओझेल हुन नपाओस्, पाइला मिलाएर चालौँ
उद्देश्य आज पूरा नभए, भोलि पूरा गर्ने अठोट लिन थालौँ ।
छोडौँ लोभ धनसम्पत्तिको भोलि खालि हात जानु छ चिहान,
गरौँ काम मिहिनेत र परिश्रमले ल्याउनु छ नयाँ बिहान,
सीमाना आज डगमगाइरहेको छ देश भन्छसँगै पाइला चालौँ
नेपाली मनको आलोक (प्यारो हाम्रो यो नेपाल)
बुद्धको देश, शान्तिको देश शिरमा हिमाल ।
नदी र नाला, झरना हेर विश्वको सुन्दर
वीरको देश भनी नचिन्ने हाम्लाई संसारमा को छ र ?
भैगो आमा !
अस्मिता राना भाट
तिम्रो मायाको स्पर्श नपाउँदै संसार छाड्नुपर्छ भने
म जन्मनाले तिमीले समाजको गुनासो सुन्नुपर्छ भने
जन्म नदेऊ मलाई
म जन्मन नपाउँदै समाजले तिरस्कार गर्छ भने
पारिवारिक हेला र घरधन्दामा नै जीवन बित्छ भने